Trend Archives - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweyne Trump oo si qabow uga hadlay Weerarkii Iiraan. “Dhammaan Ciidamadeena waa bed qabaan, mana..”
DEGDEG: Telefishanka Iran oo shaaciyey in Askar Mareykan ah lagu dilay Weerarkii saldhigga ku yaalla Ciraaq…
Iiraan oo Gantaallo ku duqeysay laba Saldhig oo Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq. [Jawaabtii dilka Gen. Suleymani]
Jawaabtii ugu horeysay ee Madaxweyne Trump: “Wax kasta waa wanaagsan yihiin; Iran ayaa weerartay saldhigyo..”
Iiraan oo ku hanjabtay inay duqeyn doonto magaalooyinka Imaaraadka iyo Israa’iil haddii Mareykanku weerarro..
Daawo: Hoggaamiyaha Ruuxiga Iiraan Aayatullahi Cali Khumeyni oo la ilmeeyay Janaasadii Gen. Qasim Suleymani..
Malaayiin Qof oo u baroor-diiqaya Jen. Qaasim Suleymaani & Meydkiisa oo soo gaaray Magaalada Tehran… (Warbixin)
Barlamanka Ciraaq oo ansixiyey Qaraar Ciidamada Mareykanka looga saarayo Dalkaasi & Wadamada Khaliijka oo loo digay.
Sheekh Xasan Nasrullaah oo ku baaqay in la weerarro dhammaan Saraakiisha & Ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe.
Madaxda Iiraan oo Aargoosi ugu hanjabay Mareykanka & Trump oo ku goodiyey Duqeyta 52 goobood oo Iran leedahay
Madaafiic lagu weerarray Saldhig Ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Ciraaq & Xisbulah oo Digniin soo saaray..
Sidee Iiraan uga aargudan doontaa Mareykanka? (Akhriso Afar tallaabo oo ay qaadi karto & Wararkii ugu danbeeyay)
Sidee Trump u go’aansaday Dilka Jeneral Qasim Suleymani..? (Xog laga helay Daqiiqadihii ugu danbeeyay ee..)
Kumanaan Qof oo Baqdaad uga qeyb galay janasada Jen. Qasim Suleymani & Iiran oo shaacisay Farriin uga timid Mareykanka..
Donald Trump: “Jeneraalka Iiraan waxaan amray in la Dilo si aan u joojino Dagaal ee ma ahayn inaan bilowno dagaal”
Gen. Ismail Ghaani “Wax yar suga waxaad arki doontaan Meydadka Askarta Mareykanka oo Bariga Dhexe meel kasta daadsan”
Golaha Amniga Qaranka Dalka Iiraan oo Mareykanka ugu hanjabay Jawaab & Aargudasho xanuun badan oo gilgisha…